Home / blog / Mirrorlọ mposi ndozi, 99% nke ndị mmadụ ga-eleghara a zuru ezu
2020 / 10 / 21 nhazi ọkwablog 1915 0
Na mgbakwunye na mposi, bezin, ịsa ahụ na ime ụlọ ịsa ahụ, ime ụlọ ịwụ ahụ chọkwara ọtụtụ ngwa ndị ọzọ, dị ka shelf, akwa nhicha ahụ, na enyo ụlọ ịsa ahụ.
Bathroomlọ ịsa ahụ bụ nke abụọ naanị na ime ụlọ na ime ụlọ ebe anyị na-eleta ọtụtụ mgbe kwa ụbọchị, n'ime ime ụlọ ịwụ ahụ, enweghị ike ịlele ọrụ nke enyo ụlọ ịsa ahụ. Enyo doro anya ma na-enwu gbaa nwere ike iweta ọnọdụ dị mma mgbe ị na-eji ejiji. Dika ibi ndu di nma, enyoghi eji ya eme ihe na ncha.
Athlọ ịsa ahụ Hedị Elu
Ogologo nke enyo ahụ bụ ihe mbụ anyị na-atụle na ntinye, n'ihi na n'adịghị ka enyo ụlọ ndị ọzọ, anyị na-ahọrọkarị ile enyo ahụ na-eguzo na ime ụlọ ịwụ ahụ. Ekwesiri ime ka enyo dị elu dabere na ogo nke ndị otu ezi na ụlọ, a ga-edowe enyo ahụ n'ihe dịka 1 mita 3 site na ala. Ọtụtụ mgbe anyị na-ahọrọ idebe etiti enyo ahụ na 160-165 cm n'elu ala.
N'ihi nha dị iche iche nke enyo ahụ, a na-enwekarị ụzọ ise iji dozie enyo ahụ: ihe nkedo nkedo, nkedo ntu, ihe nkedo, ntinye mgbatị na nkwado nkwado. Methodzọ nke ọ bụla nwere njirimara na ngwa ya.
Ọ bụghị naanị na anyị kwesịrị ịhazi ịdị elu mgbe ị na-etinye enyo ịsa ahụ, anyị kwesịrị ịmara nke ndị na-esonụ.
Ekwesiri ịwụnye enyo ịsa ahụ site na ịsa ahụ ma ọ bụ ịsa ahụ iji nye ohere zuru oke maka ọrụ ịsa ahụ.
Ebe ọ bụ na ịsa ahụ na-ebute ikuku na-ekpo ọkụ, anyị nwere ike ịtụle ịzụta enyo mgbochi igwe.
Maka nzuzo na feng shui echiche, enyo kwesịrị ihu mgbidi dị ka o kwere mee ma zere ihu ọnụ ụzọ ma ọ bụ windo.
Mgbe ị na-ahọrọ ọkụ maka oghere ime ụlọ ịwụ, anyị nwere ike ịtụle iji ọkụ ala ma ọ bụ ọkụ mgbidi. Anyị anaghị akwado ntinye nke ntụpọ n'ime ime ụlọ ịwụ ahụ, ọ bụ ezie na ihe ngosi ahụ mara mma, mana mmetụta nke mgbochi na-adịkarị njọ, n'ozuzu agaghị adị ogologo oge tupu ọdịda.
Mirrorlọ ịsa ahụ adịghị mfe ịwụnye na windo na ọnọdụ ọnụ ụzọ, iji zere ntụgharị uche na enyo mgbe ị hụrụ ụfọdụ ihe ọjọọ, na-akpata ụjọ, ụjọ, ọkachasị n'abalị.
Ọtụtụ ndị nwe ụlọ nrụzigharị ga-ama ụma belata oghere ime ụlọ ịwụ na usoro mmezi, iji mepee ime ụlọ ime ụlọ ma ọ bụ ime ụlọ, wee site na ntụgharị uche nke enyo iji mepụta nro nke oghere, site na nro anya iji mee ka ụlọ ịsa ahụ dịkwuo mma. Ọ bụrụ n’iche n’otu ụzọ, mgbe ahụ ọ dị mkpa na ị gbalịrị ịhọrọ agba dị mfe maka ime ụlọ ịwụ ahụ gị, agba ọkụ nwere ike ime ka ime ụlọ ịwụ gị saa mbara, ebe agba gbara ọchịchịrị nwere ike inye mmekpa ahụ, na ngosipụta nke enyo ahụ nwere ike ịbụ ọbụna na-emegbu emegbu karị, yabụ maka ime ụlọ ịwụ ahụ nwere enyo, ọ kachasị mma ịhọrọ agba ọkụ maka ime ụlọ ịwụ ahụ!
A na-edozi enyo ụlọ ịsa ahụ na enyo, na ọkụ dị na ime ụlọ ịwụ ahụ adịghị ahụ anya, n'agbanyeghị agbacha agba nke ime ụlọ ịwụ ahụ, ga-agbachi, mgbe ahụ, ngosipụta nke ime ụlọ ịwụ ahụ site na enyo ahụ, o doro anya na ime ụlọ ịwụ ahụ adịchaghị njọ ma na-eme mkpagide Ọ bụrụ na ime ụlọ ịwụ ahụ gbara ọchịchịrị, ebe enwere echiche, enyo ga-enwe ezigbo ọkụ, mgbe ahụ ọdịiche dị n'etiti ọkụ na ọchịchịrị nke ime ụlọ ịwụ ahụ, lee ìhè nke enyo ụlọ ịsa ahụ ga-adị mfe iji mee ka ndị mmadụ nwee obi iru ala. Ọ bụrụ na ọkụ dị, ime ụlọ ịwụ ahụ ka gbara ọchịchịrị, ogo iji enyo na-ebelata nke ukwuu. Ya mere, ọ naghị atụ aro ka ị mepụta ụlọ ịsa ahụ na-adịghị ahụ anya, ụfọdụ ndị na-eche na inyoghi inyoghi inyoghi inyo, n’ezie, na okwu nke feng shui na enyo adighi nma.
Nke gara aga :: Leaky foset? Ọrịa nchara? Mmiri ahụ ọ Na-ebelata Ngwa? Aka Na Otu esi edozi ya Osote: Ath maara Horlọ mposi “Na-esi ”sị” Dị Njọ Chọta Isi Ikike Kwadoro Ya!